Haween Danyar ah oo Lacago ay Ku Shaqaystaan La Gudoonsiiyay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Haween Danyar ah oo Lacago ay Ku Shaqaystaan La Gudoonsiiyay
Haween Danyar ah oo Lacago ay Ku Shaqaystaan La Gudoonsiiyay
Agaasimah SSWC Aamino Xaaji Cilmi ayaa sheegtay in lacagtan loogu talagalay in haweenka ay ku shaqeystaan, kuwaasi oo isugu jira kuwa horey tacadiyo kala duwan loo geystay iyo kuwa kale, waxaana ay intaa ku dartay in haweenkan ay horey u siiyeen siminaaro ku saabsan xirfado ay ku shaqeystaan,.
Qaar ka mida Haweenka lasiiyay lacagaha ayaa ka mahadceliyay oo sheegay in ay waxbadan ka tarayso noloshooda waxna ku qabsandoonana lacagaha lasiiyay ee loogu talagalay in ay wax ku qabsadaan.
Xubno ka socday Wasaaradda Haweenka iyo bulshada rayadka ayaa sheegay in ay tilaabadani wax wanaagsan u tahay haweenkan danyarta ah ayna tahay tilaabo weyn oo ku daysasho mudan.
Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed Batuuli Sheekh Axmed Gabale oo ka mid ahayd madaxdii lagu casuumay ayaa sheegtay in ay soo dhawaynayaan tilaaabdan lagu caawinayo haweenkan danyarta ah aynatahay mid dhiirigelinayso haweenka Soomaaliyeed.
Hay’adda SSWC ayaa ka mida hay’adaha u dhaq dhaqaaqa difaaca haweenka iyo carruurta.
Previous articleXukuumadda Soomaaliya oo Soo bandhigtay Waxqabadkeeda.
Next articleXukuumadda Soomaaliya oo Lawareegayso Geedi Soocodka Shirka Gobolada Dhexe.